ပလပ်စတစ်ကြိုးကွင်းများ၊ သတ္တုကြိုးကွင်းများ၊ သစ်သားကြိုးကွင်းများ - Lipu
ABS ရော်ဘာဆေးခြယ်ထားသော ချိတ်များ
Skirts Pants Hangers ၊
Laminated Hangers များ၊
PE Coated Hangers များ၊
PVC Coated Hangers များ၊
Multi Layer Pants Hanger ၊
Lipu Hometime Household Products Co., Ltd သည် Lipu၊ Guilin၊ Guangxi၊ China တွင်ရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ Hometime စက်ရုံသည် မတူညီသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နှစ် 20 ကျော် အတွေ့အကြုံများရှိပြီး 38000 စတုရန်းမီတာတွင် စံအလုပ်ရုံများနှင့် စံအလုပ်ရုံများ၊ အလိုအလျောက်နှင့် တစ်ပိုင်းအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်များဖြင့် စက်ရုံ ၃ ရုံရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် 20 သန်း pcs မှ 30 သန်း pcs ခန့်ဖြစ်သည်။pp ကြိုးကွင်းများ၊ abs ရော်ဘာဆေးခြယ်ထားသော ကြိုးကွင်းများ၊ Eco friendly ဂျုံကောက်ရိုးကြိုးများ၊ ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ကြိုးကွင်းများ၊ TPR စလစ်မချိတ်နိုင်သော ကြိုးကွင်းများ၊ ကတ္တီပါကြိုးကွင်းများနှင့် ရော်ဘာဆေးခြယ်ထားသော ကြိုးကွင်းများ၊ PE ချိတ်ထားသော ကြိုးကွင်းများ၊ ကျစ်ထားသောကြိုးကြိုးကွင်းများ၊ PVC ကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သောပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ။ ကြိုးကွင်းများ၊ ကြေးနီကြိုးကွင်းများ၊ အလူမီနီယမ် ကြိုးကွင်းများ၊ ပဝါစီစဉ်သူနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် သစ်သားကြိုးကွင်းများကဲ့သို့သော သစ်သားပစ္စည်းများ၊ ဟိုတယ်၊ လက်လီ၊ ကြမ်းခင်းထားသော ကြိုးကွင်းများနှင့် စကတ်ဘောင်းဘီ ကြိုးကွင်းများ။ကျွမ်းကျင်လုပ်သား 200 ခန့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း 40 ကျော်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ထို့ထက်မက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Hometime စက်ရုံသည် စိတ်တိုင်းကျမှာယူမှုကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် OEM ODM မှာယူမှုများအားလုံးကို လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် စူပါမားကတ်၊ လက်လီ၊ ဖက်ရှင်စတိုး၊ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်၊ မိသားစုနှင့် အဝတ်လျှော်ခန်းများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် BSCI / ISO9001 / FSC ကဲ့သို့သော လက်မှတ်များကို ရရှိထားပါသည်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးခံစားခွင့်များ၏ လုပ်ငန်းမူကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များ၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင် နာမည်ကောင်းရခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း သင့်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်သည်၊ Hometime အရောင်းအဖွဲ့မှ ကမ်းလှမ်းသည် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။Hometime မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စူပါမားကတ်များစွာတွင် အရောင်းရဆုံးအ၀တ်အစားချိတ်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်သစ်သားကြိုးကွင်းများအတွက် နိုင်ငံတကာဖက်ရှင်စတိုးဆိုင်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် စူပါမားကတ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ လက်လီ၊ လက်လီ၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ဖက်ရှင်စတိုး၊ ဟိုတယ်၊ မိသားစုအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းများဖြစ်သည်။ အဝတ်လျှော်ခန်း စသည်တို့
Eco Friendly Plas...
• ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော ဂျုံမြက်ကြိုးကွင်း • Eco ဖော်ရွေသော ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြိုးကွင်း • ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော အဝတ်ကြိုးကွင်း • အစိုနှင့် အခြောက်တွင် အသုံးပြုထားသော ကြိုးကွင်းများ • အရောင်ကွဲပြားမှုမရှိ၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိ Eco Friendly Plastic Wheat Straw Hangers for Clothes Pants Item No.: P-44510-WS ကုန်ပစ္စည်းအမည် Eco ဖော်ရွေသော ပလတ်စတစ်ဂျုံ...
Wood Coat Hanger...
• ဇိမ်ခံသစ်သားထည်ဝတ်စုံ ကြိုးကွင်း • သဘာဝအသွင်အပြင် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေပုံ • တည်တံ့နိုင်သော သစ်သားအင်္ကျီကြိုးကွင်းများ • လေးလံသော သစ်သားအင်္ကျီကြိုးကွင်းများ • ကျယ်ဝန်းသော ကြိုးကွင်းပုံစံကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော Deluxe Walnut Brown Wide Shoulder Wooden Hangers for Jacket Coat Item No.: W-9355445H ကုန်ပစ္စည်းအမည် Deluxe Walnut အညိုရောင်...
Metal Pants Rack...
•Space saver 5-layer pant hanger •Super strong steel pant hangers •Smooth surface pant ကိုကာကွယ်ပေး • Multifunctional pant organizer •အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်း သတ္တုဘောင်းဘီ Rack လက်ကား S Shape Stainless Steel Space Saving Pants Hangers Item No.: M- 31008S-SS ထုတ်ကုန်အမည် Metal Pants Rac...
•ရိုးရှင်းသောနံရံသစ်သားပြကွက်စင် •Functional wall storage shelves •Wall mounted wood storage •Nature wood texture look rustic •အသုံးပြုမှုများစွာအတွက်သင့်လျော်သော Wood Wall Shelves Mounted for Bedroom Bathroom Living Room Kitchen Office Item No.: W-32575110-S Product Name Wood နံရံကပ်စင်များ...
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပါမည်။
Zara Style Rubber Coated Non Slip Plastic Hange...
Zara Style Rubber Coated Non Slip Plastic Hangers Item No.: P-4102311-PP ကုန်ပစ္စည်းအမည် Zara Style Rubber Coated Non Slip Plastic Hangers for Clothes Material PP MOQ 3000 PCS Size L410 * T11 * H230 MM အရောင် အနက်ရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ချိတ် 360° Chrome Metal Hook သို့မဟုတ် Customized Package 100 PCS / CTN အသုံးပြုမှု ရှပ်အကျီများ အင်္ကျီဘောင်းဘီ ဝတ်စုံ လက်မှတ် BSCI / ISO9001 နမူနာရက် 7-10 ရက် ထုတ်လုပ်မှု အချိန် 30-35 ရက် သို့မဟုတ် မှာယူမှု ပမာဏအပေါ် အခြေခံ၍ FOB ဆိပ်ကမ်း- Shenzhen သို့မဟုတ် Guangz...
အလွန်ပါးလွှာသော အာကာသကို ချွေတာပြီး စလစ်မကပ်သော ရော်ဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော US...
အလွန်ပါးလွှာသော နေရာလွတ်များကို ချွေတာခြင်း မစလစ် ရော်ဘာပြုလုပ်ထားသော U-Slide ပလပ်စတစ် ကြိုးကွင်းများ အကြောင်းအရာ နံပါတ်: P-4122505-TPR ကုန်ပစ္စည်း အမည် Ultra Thin Space Saving Non Slip Rubberized U-Slide Plastic Hangers Material ABS + TPR MOQ 5000 PCS အရွယ်အစား L410 * T5 * H225 MM အရောင် ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် Hook 360°Chrome Metal Hook သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် Package 100 PCS / CTN အသုံးပြုမှုရှပ်များ Jackets အင်္ကျီဘောင်းဘီ Suit Ties Slings လက်မှတ်များ BSCI / ISO9001 / FSC နမူနာရက် 7-10 ရက် ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 30-35 ရက် သို့မဟုတ် အမိန့်အပေါ်အခြေခံ၍...
ပါးလွှာပြီး စျေးပေါသော ABS ရော်ဘာဆေးသုတ်ခြင်း ၊ စလစ်မကပ်သော multif...
ပါးလွှာပြီး စျေးပေါသော ABS ရော်ဘာဆေးသုတ်ခြင်း ဘက်စုံသုံး ပလပ်စတစ်ကြိုးကွင်း Item No.: P-42006H-ABS ကုန်ပစ္စည်းအမည် ပါးလွှာပြီး စျေးပေါသော ABS ရော်ဘာဆေးသုတ်ခြင်း ဘက်စုံသုံး ပလပ်စတစ်ကြိုးကွင်း ပစ္စည်း ABS MOQ 5000 PCS အရွယ်အစား L420*T6*H220mm အရောင် အနက်၊ မီးခိုးရောင် , အဖြူနှင့်ပိုမိုအရောင်များ Hook Silver သတ္တုချိတ် Package 120 PCS / CTN Usage Shirts, ties, etc. Certification BSCI / ISO9001 Sample Days 7-10 days Production Time 30-45 days or based on order quantity FOB Port: Shenzhen , ...
ချိတ်ဆွဲရောင်းချသူ ဒီဇိုင်းသစ် အနက်ရောင် သတ္တု Ha...
ဗီရိုနေရာက အရမ်းရှုပ်ပွပြီး လူစုလူဝေးဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ရင်နေရာပိုချွေတာနိုင်စေရန် ကြိုးကွင်းတစ်ခုတည်းတွင် ချိတ်ထားလိုပါက ဗီရိုကိုပိုမိုလှပစေရန် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ချိတ်ဆွဲလိုပါက ဤနေရာတွင် သင့်ဗီရိုအတွက် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခု၊s shape pant rack များကိုရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Hometime စက်ရုံကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ တောင်းဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည့် ကြိုးကွင်းနှင့် ပြိုင်ဆိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် သတ္တု ဘောင်းဘီ ထိန်သိမ်း လက်ကား S Shape Stainless Steel Space Saving Pants Hangers Item No.: M-31008S-SS Product Name ...
Eco Friendly Space ရောင်စုံ ဂျုံကောက်ရိုးကို ချွေတာခြင်း...
Eco Friendly Space Saving Colorful Wheat Straw Clothes Hangers Item No.: E-42006-P ကုန်ပစ္စည်းအမည် Eco Friendly Space Saving Colorful Wheat Straw Clothes Hangers Material ဂျုံကောက်ရိုးဖိုက်ဘာ + PP MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L420*H230*T6mm အရောင်ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သည် Hook Silver metal ချိတ် Package 120PCS / CTN Usage Pants ၊ စကတ်လက်မှတ် BSCI / ISO9001 / FSC နမူနာရက် 7-15 ရက် ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 30-55 ရက် သို့မဟုတ် မှာယူမှုအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ FOB Port: Shen...
အခမဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ၀၀၈၆၁၃၅၈၀၄၆၅၆၆၄
လိပ်စာ Jinniu စက်မှုပန်းခြံ၊ Licheng မြို့၊ Lipu ကောင်တီ၊ Guilin၊ Guangxi၊ တရုတ်
© မူပိုင်ခွင့် 20152025 : All Rights Reserved.